China bokotra fanao am-polony fanamiana bokotra paosy akanjo fanaingoana paosy polo logo orinasa mpanamboatra sy mpanamboatra Fahitana
Ity no karazana polo izay ahazoana aina hilentika amin'ny fotoana rehetra, ary rehefa anaovanao izany amin'ny fotoana rehetra dia tsy maintsy mahavita mifehy tasy izy, manasa matetika ary tsy fantatra. Ny lamba vita amin'ny polyester landihazo maivana dia mifangaro. Ampidiro amin'ity logo pique ity ny fanao mahazatra mba hanatsarana bebe kokoa ny marikao, hamoronana fanomezana orinasa, na hanolorana fanamiana ho an'ny mpiasa ho tian'ny olona. Vonona ny hanao traikefa isan'andro, ity polo mateza ity dia manohitra ny fihalefahana, ny fihenan-tsaina ary ny fametahana pilina. Ity lamba maivana sy maivana ity dia mahatonga ity fomba ity safidy tsara.
Karazana vokatra Akanjo Polo fanamiana namboarina
ara-nofo 60% landihazo 40% polyester
Lanjan'ny Gram 180gsm, na araka ny fangatahana
Teo aloha: mpanamboatra akanjo manokana 100% landy vita pirinty vita pirinty lehilahy bontolo fanatanjahan-tena ambony tank tank
Manaraka: fividianana volon'ondry malefaka 100% an'ny lehilahy
Vehivavy afaka miaina T -Shirt
Lehilahy T Shirt
T-Shirt nomerika fanontana nomerika
Akanjo Oem T ho an'ny lehilahy
Akanjo ho an'ny lehilahy mahazatra
ambongadiny polyester spandex mens fanatanjahantena s ...
mpanamboatra akanjo manokana 100% landihazo custo ...